Kungakhathaliseki ukuthi wenza izinto wena noma usebenza nomlingani wakho, ngingathanda ukunikeza izincezwana ezine zengcebiso engizitholile ngokuwusizo emsebenzini wami siqu. Izeluleko ezimbili zokuqala zisebenza kunoma yikuphi ukuhlolwa, kuyilapho lesibili sesibili sichaza ngokwengeziwe ukuhlolwa kwe-digital-age.
Iseluleko sami sokuqala lapho uqhuba ukuhlolwa ukuthi kufanele ucabange ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuba noma iyiphi idatha iqoqwe. Lokhu kubonakala kubonakala kubacwaningi abajwayele ukuhlolwa, kodwa kubalulekile kulabo abajwayele ukusebenza nemithombo emikhulu yedatha (bheka isahluko 2). Ngemithombo eningi iningi lomsebenzi lenziwa ngemuva kokuthi unedatha, kodwa ukuhlolwa okuphambene nalokhu: iningi lomsebenzi kufanele lenziwe ngaphambi kokuthi uqoqe idatha. Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokuziphoqa ukuba ucabangisise ngaphambi kokuthi uqoqe idatha ukudala nokurejista uhlelo lokuhlola ngaphambili kokuhlolwa kwakho lapho uchaza ngokuyinhloko ukuhlaziywa oyokwenza (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) .
Isiqephu sami sesibili seseluleko sokuthi akukho luhlolo olulodwa oluzobe luphelele, futhi, ngenxa yalokhu, kufanele ucabange ukuklama uchungechunge lwezivivinyo eziqinisa omunye nomunye. Ngizwile lokhu okuchazwe njengeqhinga le- armada ; kunokuba uzame ukwakha impi enkulu yempi, kufanele wakhe imikhumbi emincane encane enezikhwepha ezihambisanayo. Lezi zinhlobo zezifundo eziningi zokuhlola ziyisimiso sokusebenza kwengqondo, kodwa azivamile nakwezinye izindawo. Ngenhlanhla, izindleko eziphansi zezinhlelo ezithile zedijithali zenza izifundo eziningi zokuhlolwa zilula.
Njengoba inikezwe ukuthi imvelaphi evamile, ngingathanda manje ukunikeza izeluleko ezimbili ezicacile ngokwengeziwe ekuklanyeni ukuhlolwa kwe-digital age: yakha idatha yindleko eguquguqukayo (isigaba 4.6.1) futhi wakhe ukwakheka kumklamo wakho (isigaba 4.6.2).